Maplagi epasi, emahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Maplagi epasi, emahara kwenguva shoma
Zvekare tinodzokera kumutoro nechishandiso chemahara icho chatinogona kurodha pasi kwenguva shoma isina kutaurwa nemusimudziri, kuitira kuti ngatizvitorere nekukurumidza sezvazvinogona kukwanisa kutora mukana weye chipo chaunotipa kwenguva pfupi. Vhiki rino isu takakuudza nezve mamwe mafomu anga akawanikwa kwenguva pfupi kurodha mahara, senge Remote Media Player Pro iyo yatinogona kuona nayo, kugadzirisa kana kufambisa chero faira rakachengetwa pane server kana mugore uye Voice sahwira Pro izvo zvinotibvumidza isu kushandura zvinyorwa zvedu kuita zvinyorwa. Nenzira, ivo vachiri kuwanikwa kurodha mahara, zvirinani panguva yekunyora chinyorwa ichi.
Zhizha riri kuuya uye vazhinji ndivo vashandisi vari kuenda kunonakidzwa nekuzorora kunyika dziri kure. Chimwe chezvinhu zvekutanga Isu tinofanirwa kufunga kuti nderupi rudzi rwepulagi nemagetsi zvinoshandiswa munyika, kuziva kana mapulagi emidziyo yedu anoenderana kana kuti tichafanira kuenda kuchitoro chehardware, kana ndikati chitoro chehardware kwete nzvimbo yekutengesa, kutenga adapta iyo yatinogona kubaya nayo zvishandiso zvinotiperekedza mukufamba.
Plugs dzenyika chikumbiro icho chinotipa isu ruzivo rwezvitoro zvemagetsi, plugs nemagetsi mune dzinopfuura nyika mazana maviri nematunhu. Kuti tiwane nyika iyo yatinoda kubvunza, isu tinongofanirwa kushandisa yekutsvaga injini kuti iko kunyorera kutiratidze kudhirowa kwerudzi rwepulagi inoshandiswa pamwechete nemagetsi.
Maplagi epasi ane mutengo wenguva dzose muApp Store ye2,99 euros. Inoenderana kubva kuIOS 7.0 uye tinogona kuiisa pane yedu iPhone, iPad kana iPod touch. Izvo zvinoenderana neApple TV.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maplagi epasi, emahara kwenguva shoma
Nachete, wakaita musangano wakazara svondo rino, dai usina kuisa chinhu chakapusa ichi, ungadai wakamisa bhawa svondo rino, asi mukomana…. Plugs dzenyika ??? Uri kupfuurira mberi
Ini ndakaburitsa ichi chishandiso, nekuti kunyanya ndakafamba nzendo zhinji uye kunyika dzakawanda kwandaive ndisina zano kuti ndedzipi mhando dzemapulagi andaizowana.
Zvakare ikozvino kuti vanhu vazhinji vanoenda parwendo kune chero chikamu chenyika chishandiso chinoshanda, kunyangwe tikangochishandisa kamwe chete pagore.
Ndinoziva kuti hazvina kufanana nechikumbiro chatinogona kushandisa mazuva ese, asi zvinosuwisa kuti handigone kufadza munhu wese.
Kufananidza pakati peIOS 9.3.2 uye iOS 10 Beta 2 [VIDEO]